October 14, 2020 - Achawlaymyar
အဆုတျကနျြးမာရေး ခြှတျယှငျးလာပွီဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာပွလာတတျတဲ့ လက်ခဏာမြား…
October 14, 2020 by Achawlaymyar
ယနခေ့တျေမှာ လူဦးရထေူထပျပွီး ယာဉျတှေ ပေါမြားလာတာကွောငျ့ လကေောငျးလသေနျ့ရဖို့က ခကျလာပါပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ အဆုတျကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျလာပါပွီ။ အဆုတျက နမေကောငျးရငျ ခန်ဓါကိုယျမှာ လက်ခဏာတှေ ပွလာတတျပါတယျ။ ၁။ ကြောနဲ့ ပုခုံးနာကငျြလာခွငျး ရငျဘတျအောငျ့တာက အဆုတျကငျဆာရဲ့ ရှေးဦးလက်ခဏာဖွဈတာတောငျ ကြောနဲ့ပုခုံးနာကငျြလာခွငျးက တှရေ့ခဲတဲ့ လက်ခဏာပါပဲ။ ကြောနဲ့ပုခုံးနာကငျြတဲ့လက်ခဏာတှေ ပွလာရငျ အဆုတျကို ကုသလို့ရပါသေးတယျ။ နာကငျြမှုက ပွငျးထနျလာပွီး ကြောက အမွဲလိုလို နာကငျြနတေယျဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ မွနျမွနျပွသသငျ့ပါတယျ။ ၂။ ခြောငျးဆိုးခွငျး အဆုတျကနျြးမာရေးမကောငျးရငျ ခြောငျူဆိုးလာပါတော့တယျ။ အဲဒီလိုခြောငျးဆိုးတာက အအေးမိလို့ ခြောငျးဆိုးတာနဲ့ ဆငျဆငျတူပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခြောငျးဆိုးခွငျးက နာတာရှညျရောဂါတဈခုရဲ့ လက်ခဏာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ခြောငျးဆိုးလာပွီဆိုရငျလညျး မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး။ ခြောငျးဆိုးတဲ့အခါ သှေးပါလာပွီ ဆိုရငျတော့ အဆုတျကငျဆာရဲ့ … Read more
Categories ကျမ္မာရေး ဗဟုသုတ Leaveacomment
လာမယျ့တဈလအတှငျး ဘယျလိုအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈမလဲသိရဖို့ ကတျတဈခုကို ရှေးလိုကျပါ
လာမယျ့တဈလအတှငျး ဘယျလိုအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈမလဲသိရဖို့ ကတျတဈခုကို ရှေးလိုကျပါ Tarot card လေးတှကေ သငျ့ရဲ့ ကံကွမ်မာကို မသတျမှတျနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျကွုံတှရေ့မယျ့ ကံကွမ်မာနဲ့ပတျသကျပွီး အရိပျအမွှကျတော့ ပွောပွနိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ လာမယျ့တဈလအတှငျးမှာ ဘယျလိုအရာတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာ သိရဖို့ သခြောအာရုံစိုကျပွီး ဒီကတျတှထေဲက တဈခုကိုရှေးပွီးဖတျကွညျ့လိုကျနျော။ (၁) Knight of Swords ဒီကတျလေးကိုရှေးလိုကျတယျဆိုရငျတော့ လာမယျ့တဈလအတှငျးမှာ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့အရာတှေ၊ ကိုယျတှေးထားတဲ့အရာတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ မွနျမွနျဆနျဆနျပွောငျးလဲလာတာမြိုးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျဖွဈခငျြတာတဈခုကိုပဲ အာရုံစိုကျနတေော့ သငျ့အတှကျကောငျးမှနျတဲ့ တခွားအခှငျ့အရေးတှကေို သတိမပွုမိလိုကျတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဖွဈခငျြတာတှအေတှကျ ကွိုးစားနဆေဲမှာပဲ တခွားအခှငျ့အလမျးတှအေတှကျလညျး နားစှငျ့ထားမယျဆိုရငျ ပိုအဆငျပွနေိုငျပါတယျ။ (၂)7of Cups ဘာကိုမှ စိတျမဝငျစား၊ ဘာကိုမှမလုပျခငျြလောကျအောငျ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့အတှကျ အခှငျ့အရေးကောငျးတှေ အမြားကွီးရလာနိုငျပမေယျ့ … Read more
ခြင်ဆေးခွေ အမြဲလိုလိုသုံးမိနေပြီဆိုလျှင် မဖြစ်မနေ သိထားရမည့် အချက်များ……
ခြင်ဆေးခွေ အမြဲလိုလိုသုံးမိနေပြီဆိုလျှင် မဖြစ်မနေ သိထားရမည့် အချက်များ သင့်အိမ်မှာ ခြင်ဆေးခွေနှင့်ပရုတ်လုံးတွေံ အသုံးပြုနေပါက ဒီစာစုလေးကို မဖြစ်မနေ သိထားသင့်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်အရ နှစ်စဉ် အမေရိကန်လူမျိူး ၃၃.၁မီလ်ီယန်လောက်ဟာ အိမ်သုံးပစည်း များကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းကို ခံစားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းဟာ အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွင်ပါဝင်သော ဓာတုပစည်း များကြောင့်လို့ သိပံပညာရှင်များက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ (၁)ခြင်ဆေးခွေ မြန်မာနိုင်ငံလို ခြင်ပေါတဲ့ နိုင်ငံအနေနှင့်တော့ ခြင်ဆေးခွေဟာ မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နယ်ဘက်လိုနေရာ မျိူးတွေမှာဆိုရင် ခြင်ဆေးခွေကို အိမ်တိုင်းနီးပါး အသုံးပြုကြပါတယ်။ခြင်ပြေးစေတာမို့ ခြင်နှင့်ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးပြဿနာများကို တားဆီးနိုင်သော်ငြားလည်း အခြားသော ကြောက်စရာရောဂါတွေကိုတော့ လက်ယပ်ခေါ်နေသလို ဖြစ်စေကြောင်းတွေ့ရှိထားပါတယ်။ သိပံ္ပပညာရှင်တွေရဲ့ စမ်းသပ်ချက်များအရ ခြင်ဆေးတစ်ခွေကနေလာသော မီးခိုးငွေ့တွေဟာဆိုရင် ဆေးလိပ်ပေါင်း ၇၅လိပ်ကနေ၁၃၇လိပ်ကနေ ထွက်လာသောမီးခိုးငွေ့တွေနဲ့ ညီမျှတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်သော ရောဂါဆိုးကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ကောင်းကောင်း … Read more
ခြင်တွေက သင့်ကိုပဲရွေးကိုက်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ
ခြင်တွေက သင့်ကိုပဲရွေးကိုက်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ..? သူတွေပါတဲ့။ သင်ရော အဲဒီ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထဲမှာပါနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ခြင်တွေက လူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ သင့်ကိုပဲ ရွေးပြီးကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ဘာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် အမြဲ ခြင်တွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေရလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ အဝတ်အစား ခြင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ သားကောင်ကို အမြင်နဲ့ပဲ ရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ခြင်တွေကတော့ အမြင်အာရုံကောင်းကြပြီး ညနေပိုင်းအချိန်မှာ အမြင်အာရုံနဲ့ပဲ လူတွေကို ရှာဖွေပါတယ်။ ချက်ခြင်းမြင်တွေ့လွယ်တဲ့ အရောင်တွေဖြစ်တဲ့ အနီ၊အနက်နဲ့ နက်ပြာရောင် ဝတ်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ အများဆုံး အကိုက်ခံရပါတယ်။ သွေးအမျိုးအစား အရွယ်ရာက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ခြင်ထီးတွေကတော့ ဝတ်မှုန်တွေကို စားသုံးကြပေမဲ့ ခြင်မတွေကတော့ ဥဥဖို့အတွက် သွေးကို သူတို့ရဲ့ အာဟာရအဖြစ် သောက်သုံးရပါတယ်။ O သွေး အမျိုးအစားတွေကတော့ A နဲ့ … Read more
သငျအကွိုကျဆုံး သဈသီးကိုကွညျ့ပွီး သငျ့အကွောငျး ပွောပွမယျ
သငျအကွိုကျဆုံး သဈသီးကိုကွညျ့ပွီး သငျ့အကွောငျး ပွောပွမယျ . . သဈသီးလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး သငျအကွိုကျဆုံး သဈသီးတဈမြိုးကို အရငျဆုံး ရှေးလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အဲဒီသဈသီးကပွောတဲ့ သငျ့အကွောငျးကို ဖတျရှုလလေ့ာနိုငျပါတယျ။ 1. ပနျးသီးက သငျ အကွိုကျဆုံး သဈသီးဆိုရငျ သငျဟာ အပေါငျးအသငျးတှဆေုံရငျ စကား အမြားဆုံး ဒိုငျခံပွောနတေတျတဲ့သူ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို လငျြလငျြမွနျမွနျခနြိုငျပွီး ရုတျတရကျ ဖွဈလာတဲ့ ကိစ်စတှကေို ခကျြခငျြးဆိုသလို ဖွရှေငျးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ ခရီးသှားရတာကို နှဈသကျပွီး မရောကျဖူးတဲ့ နရော အသဈတှကေို သှားခငျြနေ သူပါ။ သငျဟာ ခေါငျးဆောငျကောငျး တဈယောကျလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ ဆှဲဆောငျနိုငျစှမျး ကောငျးသူတှေ ဖွဈတတျပွီး သငျ့လကျတှဲဖျော အပျေါကို လှမျးမိုးနိုငျမယျ့ သူပဲဖွဈပါတယျ။ 2. … Read more
ပုံမှနျထကျပိုပွီး စီးပှားတကျလာဘျရှငျ လာဘျပှငျ့စရေနျ….
စီးပှားတကျ ထောပတျနှငျ့ပြားရညျစကျ ယတွာ လှူကွညျ့ပါမိတျဆှအေလှနျပဲထူးခွားအစှမျးထကျ စီးပှားတကျလာဘျပှငျ့စပေါလိမျ့မယျ။ ကွှပေနျးကနျပွားတဈခပျြထဲမှာထောပတျဆီတှေ ထညျ့ပွီးထောပတျပျေါကပြားရညျဆနျး၍ ဘုရားကပျလှူကာ စီးပှားတကျလာဘျရှငျ လာဘျပှငျ့ပါစကွေောငျးဆုတောငျးသမှုပွုပါ။ တနလျာ နတေို့ငျးမနကျ၉နာရီ၄၅မှာ ၊အပတျစဥျလှူဒါနျးပွီးဆုတောငျးသမှုပွုခွငျးအားဖွငျ့ ခုနှဈရကျသားသမီးအပေါငျးတို့စီးပှားတကျလာဘျရှငျလာဘျတှဝေငျကွပါစကေုနျသတညျး။ စတေနာမှနျလြှငျကံကောငျးမညျ ကဇေျောဟိဏျး ၀၉၇၆၈၂၅၈၁၇၁ Zawgyi စီးပွားတက် ထောပတ်နှင့်ပျားရည်စက် ယတြာ လှူကြည့်ပါမိတ်ဆွေအလွန်ပဲထူးခြားအစွမ်းထက် စီးပွားတက်လာဘ်ပွင့်စေပါလိမ့်မယ်။ ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ထဲမှာထောပတ်ဆီတွေ ထည့်ပြီးထောပတ်ပေါ်ကပျားရည်ဆန်း၍ ဘုရားကပ်လှူကာ စီးပွားတက်လာဘ်ရွှင် လာဘ်ပွင့်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းသမှုပြုပါ။ တနလ်ာ နေ့တိုင်းမနက်၉နာရီ၄၅မှာ ၊အပတ်စဉ်လှူဒါန်းပြီးဆုတောင်းသမှုပြုခြင်းအားဖြင့် ခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းတို့စီးပွားတက်လာဘ်ရွှင်လာဘ်တွေဝင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ စေတနာမှန်လျှင်ကံကောင်းမည် ကေဇော်ဟိဏ်း ၀၉၇၆၈၂၅၈၁၇၁
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းသိတတ်လွန်းတဲ့လူမျိုးတွေက ဘယ်တော့မှ တန်ဖိုးထားမခံရဘူး…
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းသိတတ်လွန်းတဲ့လူမျိုးတွေက ဘယ်တော့မှ တန်ဖိုးထားမခံရဘူး… ချစ်သူအပေါ် အရမ်းသိတတ်လွန်းတဲ့လူမျိုးတွေက ဘယ်တော့မှ တန်ဖိုးမထားမခံရဘူး… ချစ်သူအပေါ်အရမ်းသိတတ်လွန်းတဲ့သူတွေအားနာတတ်လွန်းတဲ့သူတွေ သိပ်ချစ်လွန်းတဲ့သူ …၊ အနစ်နာခံတတ်တဲ့သူ တွေမှာ အပင်ပန်းရဆုံး အချိန်က ဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်ပြုံးပြ ရတဲ့အချိန်ပဲ ကိုယ်နာကျင်နေပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်နာကျင်အောင် လုပ်တဲ့သူကို ပြန်နာကျင်အောင်လုပ်ဖို့ မပြောနဲ့ …၊ ကိုယ်နာကျင်နေတာတောင် သူသိမှာစိုးလို့ ဟန်ဆောင်ပြုံးပြတတ်တဲ့ သူမျိုးတွေ …၊ သိပ်အလိုက်သိ သိပ်ကို မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲ ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ ဘာဖြစ်နေတယ်တော့ ဘယ်သူမှ မသိစေရဘူး …။ နာကျင်လေလေ ရယ်စရာတွေပြော ဟာသတွေ လျောက်လုပ်နဲ့ ကိုယ်မပျော်တာတောင် သူများပျော်အောင် လုပ်ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးတွေ …။ I’m okay ဆိုတဲ့ စကားကို အမြဲပြောတတ်ပေမယ့် အမြဲပြုံးနေတတ်ပေမယ့် …၊ သူတို့ကတစ်ကယ်တော့ … Read more
Categories အချစ်နှင့်ဘဝ Leaveacomment
မွနျမာ လူမြိုး အမြားစုတှေ ဆငျးရဲစတေဲ့ အခကျြ (၃၇)ခကျြ
မြန်မာလူမျိုး အများစုတွေကို ဆင်းရဲစေတဲ့ အချက် (၃၇) ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေ တကယ် မှန်၊ မမှန် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး ခင်ဗျာ (၁) မြန်မာအများစုက (TEAM WORK) အားနည်းတယ်။ မညီညွတ် ဘူး (၂) ဘေးကနေ သွေးခွဲရ လွယ်တယ်။ (၃) မနာလိုစိတ် များတယ်။ (၄) အချင်းချင်း ထဲ ကိုယ့်ထက် သာသွားမှာ မလိုလားဘူး။ သာရင်လည်း မနာလိုဘူး။ (၅) သူများကို ချီးကျူးရင် မကြိုက်ဘူး။ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချီးကျူး စေချင်တယ်။ (၆) မုဒိတာ မပွါးနိုင်ဘူး။ (၇) ကြိုးစားရမယ့် နေရာတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။ (၈) သူများမလုပ်ရင် မလုပ်ချင်ဘူး။ (၉) … Read more
Categories အထွေအထွေဗဟုသုတ Leaveacomment
သတိထားတဲ့ အမှုမဲ့အမှတျတမဲ့ ကွောကျစရာအန်တရာယျ
သတိထားစရာ အမှတျတမဲ့အန်တရာယျ ရုတျတရကျနှလုံးခုနျရပျပွီး သှေးလညျပတျမှု့ရပျ ကာ ဦးနှောကျသို့သှေးမရောကျလငျြ လူသညျ ၅ မိနဈအတှငျးသစေနေိုငျသညျကို သိပွီးသူမြား ပါသညျ ။ နှလုံးခုနျမရပျပဲ ဦးနှောကျသှေးကွောပိတျကာ သဆေုံးဖူးသူတှရှေိပါသညျ အကျစီးဒငျ့မဟုတျပဲ အမှတျတမဲ့ဖွဈတတျသော ကိစ်စမို့အမြားကသတိ မထားမိကွပါ ။ ထိုအရာမှာ ဝါးပကျလကျကုလားထိုငျ ပငျဖွဈ၏ တခြို့က ထိုထိုငျခုံပျေါလှဲလကျြစာဖတျခွငျးအိပျ ခွငျးမြား ပွုလုပျတတျသညျ ။ ထိုငျခုံ၏ ခေါငျးမှီတနျးမှာ ဦးခေါငျးနောကျစိသှေး လညျပတျရာကို ဖိမိပွီးဖွဈသလိုဖွဈနတေတျ၏ နှလုံးမှဦးခေါငျးသို့ ပို့လှတျပေးသောသှေးမြားက ပိတျဆို့ပွီး အသကျအန်တရာယျရှိလသေညျ ။ ကြှနျတေျာ့၏ အသိမိတျဆှမှောထိုသို့ဖွဈခဲ့ဖူးပွီး သူသညျ အထကျကပုံစံမြိူး ပကျလကျကုလား ထိုငျပျေါအိပျနပွေီး ပွနျလညျသတိမရပဲသဆေုံး သှားခဲ့ဖူးလသေညျ ။ ။ စတေနာဖွငျ့ အသိပေးရေးသားလိုကျပါသညျ သတိမူ၍ဂူမွငျနိုငျကွပါစေ ။ Sai Min Thant … Read more
တကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျား နဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ယောက်ျား…
တကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျား နဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ယောက်ျား မိန်းခလေး တယောက်က သူ့ချစ်သူ ကောင်လေးနဲ့6နှစ် အကြာ လက်တွဲ ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက သူမကို လက်ထပ်ယူဖို့ စိတ်ကူး မရှိခဲ့ဘူး ။ အဲဒါကြောင့် ဒီ6နှစ် ကြာ အချစ်ဇာတ်လမ်း ကို သူမ ဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ ရွေးချယ် လိုက်တယ် ။ သူမရဲ့ အခုလက်ရှိ လင်ယောက်ျားကို အိမ်ထောင်ဖက် တွေ့တဲ့ အနေနဲ့ စတွေ့တဲ့ အချိန်တုန်းက သူမ အိမ်ထောင်ပြုချင်ပြီလို့ ပြောခဲ့တယ် ။ သူမရဲ့ ယောက်ျားက တချက်ပြုံးသွားတယ် ။ အတူတူ ထမင်း စားခဲ့ကြပြီး ပျော်ရွှင်စွာ စကားတွေ ပြောခဲ့ကြတယ် ။ … Read more